Daraasad ayaa cadeyneysa kororka roobabku qaab baraf leh | Saadaasha Shabakadda
Xaaladaha cimilada ayaa isbedelaya sannadihii la soo dhaafay, sidaas oo kale tobanaan sano ka dib, sidoo kale cimilada ayaa isbedelaysa. Baadhitaan ay sameeyeen Isbaanishka iyo Faransiisku waxay diiradda saareen daraasadda roobabka oo ah qaabka roobdhagaxyaalaha ka diiwaangashan koonfurta Faransiiska tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Daraasada waxaa lagu daabacay joornaalka Cilmi-baarista Hawada iyo wuxuu bartay diiwaanka roobdhagaxyada intii u dhaxeysay 1948 ilaa 2015. Waa maxay natiijooyinka aad heshay iyo sida ay muhiimka u yihiin?
1 Roob baraf leh
2 Diiwaanka iyo xogta
3 Baraf iyo kuleylka adduunka
Roob baraf leh
Daraasadu waxay eegaysaa isbedelka ku wajahan jawiga cimilada ee door bidaya kororka dhacdadan saadaasha hawada, laakiin cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in arrimo kale ay yareyn karaan oo ay sababi karaan inay dhab ahaan sii kordhayaan oo keliya soo noqnoqoshada duufaannada roobdhagaxyaalaha waaweyn, halka roobdhagaxyaalaha daciifka ahi yaraadaan.
Sababtoo ah xaaladaha saadaasha hawada ee sameeya roobdhagaxyaale waa kuwo aan xasilloonayn oo aan si joogto ah u joogin goobta iyo waqtiga, waa arrin aad u adag in la helo xog-ururin dhammaystiran oo lagu baran karo isbeddelkeeda iyo isbeddelkeeda.
Daraasaddan waxaa fuliyay Kooxda Fiisigiska Hawada ee Machadka Deegaanka ee Jaamacadda León, jIyadoo ay weheliyaan Jaamacadda Complutense ee Madrid iyo Anelfa, xarun cilmi baaris oo ku taal Toulouse.
Sababta aan kor ku soo xusnay awgeed, daraasaddu waxay diiradda saartay gobollada Faransiiska oo ay ka jiraan xog joogto ah oo aan kala go 'lahayn in ka badan 25 sano. Anelfa waxay leedahay in kabadan 1.000 xarumood oo cabira duufaanka. . Halkaas, farsamooyinka tirakoobka ee sida ballaaran loogu adeegsaday daraasadaha cimilada ayaa loo isticmaalay in lagu xisaabiyo isbeddellada.
Diiwaanka iyo xogta
Gobolka Pyrenees inta jeer ee roobdhagaxyaale uu kordho 25kii sano ee la soo dhaafay, iyadoo kuxiran meelaha la falanqeeyay. Taariikhahaas looma gudbin karo gobolada kale ee ku dhow maaddaama xaaladaha samaynta roobdhagaxyaale ay yihiin kuwo aan caadi ahayn. Hadday ahaan lahaayeen roobab qaab roob ah, haddii ay suurtagal tahay in la ogaado nidaamka roobka ee gobollada u dhow kuwa la falanqeeyay.
Isku dayga lagu doonayo in lagu gaaro gunaanad aad u adag oo guud ahaaneed, iyadoo la ogyahay in Spain aysan haynin xog joogto ah ama diiwaanno roobdhagaxyaale ah, waxa la raadiyay ayaa ah in la helo xiriiro ka dhexeeya beeraha cimilada iyo roobdhagaxyaalaha.
Sidan oo kale, daraasaddu waxay falanqeeysay isbeddellada ay ku hareeraysan yihiin goobaha bey'aduhu markay u nugul yihiin uguna roonaan karaan muuqaalka roobdhagaxyaalaha. Calaamadaha natiijooyinka isbeddel weyn 60kii sano ee la soo dhaafay xagga deegaanno wanaagsan si duufaannada roobdhagaxyadu u samaysmaan.
Si kastaba ha noqotee, isbeddelkan waa inaan loo fasirin inuu yahay koror ku soo noqnoqoshada roobdhagaxyaalaha dhulka, maaddaama ay jiraan arrimo badan oo dheeri ah oo la tixgelinayo, sida dhalaalida roobdhagaxyada markay ka soo dhacdo daruuraha. Dhacdooyin badan oo roob ah oo qaab roob dhagaxyaale ah kuma dhammaado inay gaaraan dhulka maxaa yeelay waxay ku noqdaan xaalad dareere ah ka hor inta aysan dhulka ku dhicin.
Kuleylka adduunka dartiis, bay'adaha iyo xaaladaha ugu habboon ee duufaannada roobwaxalaha ku dhaca waxay ku dhacayaan soo noqnoqosho sii kordheysa. In kasta oo ay tahay in sidoo kale la ogaado in, iyadoo kululaaneysa adduunka, heerka barafka iyo barafku way sii kordhayaan. Heerkan waxaa loo yaqaan isozero, taas oo ah, dhererka laga helo heer-kulkiisu yahay eber darajo Celsius ah oo barafku ka bilaabmayo inuu dhalaaliyo.
Tani waxay soo saartaa tiro badan oo duufaanno leh roob dhagaxyaale, laakiin in badan oo kamid ah barafku aakhirka wuu dhalaalaa kahor inta uusan dhulka gaarin oo kaliya dabeylaha ugu daran iyo kan ugu weyn ayaa aakhirka gaadha dusha.
Baraf iyo kuleylka adduunka
Hubaal la'aanta soo noqnoqda roobdhagaxyaalaha way adagtahay in loo wareejiyo xaaladaha cimilada ee kululaanaya, maaddaama ay adag tahay in lagu saadaaliyo moodellada isbeddellada la isku halleyn karo ee dhacdadan.
Jawiga kuleylka waxaa jira tamar badan oo loogu talagalay shirarka qotada dheer inay dhacaan, taas oo doorbideysa muuqaalka duufaano leh roob dhagaxyaale, laakiin isla mar ahaantaana, kororka heerka isozero wuxuu door bidaa dhacdadiisa. dhalaalida roobdhagaxyaalaha taasoo ka dhigeysa inay u dhowdahay inay dhulka ku dhacdo. Way adag tahay in la ogaado labadan dhacdo midkee saamaynta ugu badan roobdhagaxyaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daraasad ayaa xaqiijinaysa kororka roobab ee qaabka roobdhagaxyaalaha
Mexico iyo Japan, waa laba dal oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dhulgariir